Niha maro ihany koa ireo mpanondrana nahazo fankatoavana amin’ny fiotazana lavanila taona 2018-2019 raha ny antontanisa navoakan’ny minisiteran’ny indostria sy ny varotra ary asa tanana. Na izany aza dia hita ho mbola maro ireo tsy fanaraham-penitra amin’ny fikirakirana sy ny fitehirizana ny vokatra. Mbola maro ihany koa ireo toeram-pivarotana tsy manana fankatoavana ny amin’ny famoahana ny vokatra, indrindra ireo any amin’ny saro-dalana. Izany indrindra no antony nahazoana fanohanana ara-teknika avy amin’ny tetikasa SADC-TRF entina hanamafisana ny fahaiza-manaon’ny ny sampandraharaha misahana ny kalitao sy ny fitehirizana entana eo anivon’ny minisiteran’ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana. Hanamora ny fivezivezen’ireo mpiasa amin’ny toerana lavitra sy saro-dalana ary hahafahan’izy ireo hanome ny fankatoavana amin’ny toeram-pivarotana amin’ity taom-piotazana ity no anton’ny fampitaovana. Fa ankoatr’izay dia hohamafisina ny fanaraha-maso ny fitehirizana sy ny kalitaon’ireo vokatra lavanila haondrana mba hifanaraka tsara amin’ny fenitra takian’ny iraisam-pirenena, araka ny nambaran’ny teo anivon’ny minisitera.